Akụkọ - Gịnị kpatara eji achọ njigide nchekwa?
Workingrụ ọrụ ikuku na-enwe nnukwu ihe egwu, ọkachasị na ebe a na-ewu ụlọ, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ anaghị eche banyere ya, ha ga-eche ihe egwu ịda.
A ghaghi ichikota ihe eji eriri oche. N'ime usoro mmepe ụlọ ọrụ, enwerekwa mmadụ ole na ole na-eji eriri oche anaghị agbaso iwu ma na-ebute nsonaazụ dị egwu.
Dika onu ogugu onu ogugu banyere ihe mberede ihe mberede, ihe dika 20% nke ihe mberede dara n'elu 5m na 80% n'okpuru 5m. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mbụ bụ ihe mberede na-egbu egbu. Enwere ike ịhụ na ọ dị ezigbo mkpa iji gbochie ịda site na ịdị elu ma were usoro nchebe onwe onye. Nnyocha achọpụtala na mgbe ndị mmadụ na-ada n’ala na mberede, ọtụtụ n’ime ha na-ada n’ala dị mfe ma ọ bụ na-adịkarị mfe. N'otu oge ahụ, ikike kachasị ike nke afọ (n'úkwù) mmadụ nwere ike iguzogide buru ibu ma e jiri ya tụnyere ahụ dum. Nke a abụrụla ihe ndabere dị mkpa maka iji eriri nchekwa, nke nwere ike ime ka ndị ọrụ rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu na ebe dị elu, ma ọ bụrụ na ihe ọghọm, ha nwere ike zere oke mbibi na-emebi ahụ mmadụ nke ọdịda kpatara.
Aghọtara na n'usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, enwere ọnụọgụ dị elu nke ndị nwụrụ n'ihi ọdịda mmadụ na-ada. Nyocha ọnụ ọgụgụ nke ihe ọghọm ọdịda mmadụ na-eweta ihe dịka 15% nke ihe mberede metụtara ọrụ. Ọtụtụ ihe mberede egosila na ihe ọghọm nke ikuku na-akpata na-akpata ọnye, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-akpata ndị na-arụ ọrụ anaghị etinye eriri oche dịka iwu si dị. Fọdụ ndị ọrụ na-eche na ebe ha na-arụ ọrụ anaghị adị elu n'ihi na ha amataghị nchekwa. Ọ dị mma ịghara iyi eriri oche nwa oge, nke na-eduga n'ihe ọghọm.
Kedu ihe na-esi na ịrụ ọrụ n'ogologo na-enweghị eriri belt? Olee otú ọ na-adị onye na-akụpịa n’ejighị okpu agha mgbe ị na-abanye ebe a na-ewu ya?
Tọlite ​​ụlọ nzukọ ahụmịhe nke nchekwa bụ ihe dị mkpa maka nchekwa na mmepeanya nke saịtị ewu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe eji arụ ụlọ na-etinye ụlọ nzukọ ahụmịhe nke nchekwa anụ ahụ na ụlọ nzukọ ezumezu nchekwa VR iji kụziere ndị ọrụ iwu ihe gbasara nchekwa.
Otu n'ime halllọ Nzukọ Alaeze na-ahụ maka nchekwa nchekwa na-ekpuchi mpaghara nke mita 600. Ihe oru ngo a gunyere ihe kariri ihe 20 dika okpu agha na odida onu, nke mere na ndi mmadu na-ada mkpu mgbe nile maka nchekwa na mmeputa.
Ngwunye ígwè 1.300g na-akụ okpu agha
Nwere ike iyi okpu agha nchebe wee banye n'ime ụlọ ahụmịhe ahụ. Onye ọrụ ahụ na-agbanye bọtịnụ na bọmbụ 300 gram dị n'elu isi dara ma kụọ okpu nchekwa ahụ. Will ga-eche ahụ erughị ala erughị ala n'elu isi na okpu a ga-agbagọ. "Ike mmetụta a bụ ihe dịka kilogram 2. Ọ dị mma inwe okpu agha maka nchekwa. Gini ma ọ bụrụ na i yighị ya?" Onye nduzi nchekwa saịtị ahụ kwuru na ahụmịhe a na-adọ onye ọ bụla aka na ntị na ọ bụghị naanị na okpu agha ga-eyi ya, kamakwa ka ọ sie ike.
2. Ọnọdụ nke ihe dị arọ na otu aka ezighi ezi
Enwere "mkpọchi ígwè" nke dị kilogram 10 n'arọ, 15 n'arọ, na 20 n'arọ n'otu akụkụ ụlọ nzukọ ahụ, yana aka 4 dị na "mkpọchi ígwè". "Ọtụtụ ndị mmadụ dị ka ihe ejiri aka dị arọ, nke nwere ike imebi akụkụ nke akwara psoas ngwa ngwa ma kpatara mgbu n'oge usoro ịkpa ike." Dị ka onye nduzi ahụ si kwuo, mgbe ị na-amaghị ọtụtụ ihe dị na ebe a na-ewu ihe, ị kwesịrị iji aka ya abụọ bulie ya ma jiri aka abụọ kesaa ibu ahụ, nke mere na a na-emesi ọkpụkpụ lumbar ike. Ihe ndị ị ga-ebuli ekwesịghị ibu ibu. Arụ arụrụala na-ewute ukwu karịa. Ọ kachasị mma iji ngwaọrụ buru ibu dị arọ.
Nwee ụjọ ịtụda site n'ọnụ ụzọ ọgba ahụ
Underlọ ndị a na-arụ ọrụ na-enwekarị "oghere". Ọ bụrụ na agbakwunyeghị ngere ma ọ bụ ihe mkpuchi, ndị na-ewu ụlọ nwere ike ịdakwasị ha n'ụzọ dị mfe ma daa. Ahụmịhe nke isi na olulu karịa 3 mita dị elu bụ ka ndị na-ewu ụlọ nwee ahụ ụjọ ịda. Rụ ọrụ n'ebe dị elu na-enweghị eriri oche, nsonaazụ nke ịda bụ ọdachi. N'ime mpaghara ahụmịhe nke belt oche ahụ, onye ọrụ nwere nkà na-ejide eriri oche ahụ ma na-adọrọ ya n'ime ikuku. Usoro nchịkwa nwere ike ime ka ọ "ọdịda efu". Mmetụta nke ịda na-enweghị ibu na ikuku na-eme ka ahụ ghara iru ya ala.
Site na ịmegharị ebe a na-ewu ihe owuwu, ụlọ nchekwa ahụ na-enye ndị ọrụ iwu ohere iji aka ha hụ ojiji ziri ezi nke ngwa nchekwa yana mmetụta oge ọ bụla mgbe ihe egwu dị, ma jiri nlezianya chee mkpa ịdị na-ewu nchekwa na ngwa nchekwa, iji wee nwee melite mmata nchekwa na mmata mgbochi. Weta ahụmahụ bụ otu n'ime isi.
Ọrụ nke mpaghara ahụmịhe belt oche:
1. Tumadi na-egosi usoro ejiji dị mma yana akụrụngwa nke eriri oche.
2. Onwe gị na-eyi ụdị eriri nchekwa dị iche iche, nke mere na ndị na-ewu ụlọ nwere ike ịnweta mmetụta nke ọdịda ozugbo na elu nke 2.5m.
Nkọwapụta: Ejiri 5cm × 5cm rụọ nchara okirikiri nke ụlọ nzukọ ahụmịhe belt ahụ. Ogwe obe na kọlụm akụkụ akụkụ abụọ bụ 50cm × 50cm. Ejiri bolts jikọọ ha, ogo ya dị 6m, akụkụ mpụga n’etiti ogidi abụọ ahụ dịkwa 6m n’ogologo. (Dị ka mkpa ụfọdụ nke ebe owuwu ahụ si dị)
Ihe: 50 ekara nkuku ígwè jikọtara ịgbado ọkụ ma ọ bụ ígwè anwụrụ erection, mgbasa ozi ákwà ọbọp, 6 cylinders, 3 ihe. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ihe mberede, gụnyere ihe ndị mmadụ, ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi, ihe njikwa, na ịdị elu ọrụ. I kwesịrị ịma na ọ bụghị naanị ịdị elu 2 mita ma ọ bụ karịa ka ọ dị egwu ịda. N'ezie, ọbụlagodi na ịda site n'ogo karịa 1 mita, Mgbe akụkụ dị mkpa nke ahụ metụrụ ihe dị nkọ ma ọ bụ sie ike, ọ nwekwara ike ibute mmerụ ahụ dị njọ ma ọ bụ ọnwụ, yabụ ahụmịhe nchekwa nchekwa na saịtị ahụ dị mkpa ! Cheedị n'echiche, ezigbo ọrụ ọrụ ụlọ ga-adị elu ma dị egwu karịa nnukwu ụlọ ọrụ ahụmịhe.
Na mmepụta nchekwa, anyị nwere ike ịhụ na eriri nchekwa bụ nkwa kachasị ike maka ịrụ ọrụ ikuku, ọ bụghị naanị maka onwe gị, kamakwa maka ezinụlọ gị. Biko dị njikere iyi eriri nchekwa mgbe ị na-ewu ihe.